Ukusuka 'Ukubulala Umkhombandlela,' iNew American Classic Inoveli
I-Atticus Finch ingomnye wamanani amaninzi ayingcamango kwiincwadi zaseMelika. Bobabini encwadini nakwifilimu, i-Atticus imele inkulu kunobomi, isibindi-kwaye-isibindi ngokuchasene nobuxoki nokungabi nabulungisa. Ubungozi bakhe ubomi kunye nomsebenzi wakhe (kubonakala engenakhathalela), njengoko evikela umntu omnyama ngokubhekiselele kumacala okudlwengula (awayesekelwe ebuxoki, ukwesaba, nokungazi).
Lapho i-Atticus ibonakala khona (kunye nokuphefumlelwa kwalolu hlobo):
I-Atticus ibonakala kuqala kwiveli entsha yeHarper Lee, ukubulala i-Mockingbird .
Kuthiwa kuthiwa isekelwe nguyise ka-Lee, u-Amasa Lee, (obeka inzululwazi ebonakalayo kwi-inoveli). U-Amasa wayephethe izikhundla ezininzi (kubandakanywa nomgcini-mgcini kunye nomphathi wezemali) - wayenomthetho kwi-Monroe County, kwaye ukubhala kwakhe kuhlolisise izihloko zobudlelwane bobuhlanga.
Xa wayelungele indima ye-Atticus Finch kwinguqulelo yefilimu, uGregory Peck waya e-Alabama waza wahlangana noyise ka-Lee. (Kubonakala sengathi wafa ngo-1962, ngaloo nyaka ifilimu ephumeleleyo ye-Academy-Award).
Ngexesha le-noveli, sifumanisa ukuba umfazi wakhe wafa, nangona asizange sithole ukuba wafa njani. Ukufa kwakhe kushiye umngxuma wekhaya, oye waba (ubuncinci) ozaliswe ngumgcini-ndlu / umpheki (uCalpurnia, umqeqeshi osisigxina). Akukho nto ikhankanyiweyo ye-Atticus ngokumalunga nabanye abesifazana kwiveli, okubonakala kubonisa ukuba ugxile ekwenzeni umsebenzi wakhe (ukwenza umehluko, nokuphishekela ubulungisa), ngelixa ephakamisa abantwana bakhe, uJem (uJeremy Atticus Finch) kunye Scout (uJean Louise Finch).
I-Atticus ngummeli waseMaycomb, kwaye ubonakala ehla evela kwintsapho yakudala yasekhaya. Uyaziwa kakhulu kuluntu, kwaye ubonakala ehlonishwa kwaye ethandwa. Nangona kunjalo, isigqibo sakhe sokumelana noTom Robinson ngokubhekiselele kwiimangalo zobuxoki zokudlwengula kumhlaba kwiinkathazo ezininzi.
Icala laseScottsboro , ityala lezomthetho elibandakanya ummangalelwa omnyama osithoba kunye nolahlwa phantsi kobufakazi obungathandabuzekiyo, kwenzeka ngo-1931 - xa uHarper Lee wayeneminyaka emihlanu ubudala.
Le meko ikhuthazwa yileveli.
Imibuzo yengxoxo 'IKarimesi yeKarimesi'
UBhatshebha - Umfazi kaKumkani uDavide
Yintoni 'Ukujongana' kwiiKlasi zeGalofu?
Iingcebiso ezivela kuMfundisi wabafundi abadala
Iingxaki zokujongana neengxaki zengxowankulu yesiXhosa